Ifektri yeCompostable | Kwichina Abavelisi beeNgxowa eziCwangcisiweyo, abaXhasi
Iipesenti ezingama-100 ezinokuchuma kunye nezinokuboliswa ziintsholongwane ziyinto ekufuneka yenziwe kubo bonke abathandi bezilwanyana zasekhaya. Incinci kwaye ikhululekile ukuyichukumisa, ke ungayithatha xa uhamba nenja yakho. Ayivuzi kwaye inamandla amakhulu, ngenxa yoko unokukhathalela zonke iimfuno zenja yakho kwaye ushiye isixeko sakho sicocekile kwaye simnandi emehlweni akho. Gcina inja yakho yonwabile kwaye isixeko sakho sicocekile kunye neengxowa zethu zenja.
Iingxowa zethu zenkunkuma zenziwe ngezinto zendalo kwaye zi-100% zinokuchumisa kwaye zinokuboliswa ziintsholongwane. Ukuchithwa kwezinto eziphilayo kunye nokuqina kwayo kuqinisekisiwe yimibutho ethembekileyo yamanye amazwe. Izinto zethu ziya kuthoba ngokupheleleyo kwiinyanga ezininzi kwiimeko zeshishini.
Iingxowa zethu zeblue lolona khetho lubalaseleyo kwizinto zobuqu ezibuthathaka okanye ezixabisekileyo kunye nentengiso. Kukho iimeko ezahlukeneyo zokusetyenziswa, ezinjengokuthumela izinto zexabiso ezinje ngeefowuni eziphathwayo, ukupakisha iimveliso ezibuthathaka njengeglasi. Kananjalo inokusetyenziselwa ukugcina izinto ezixabisekileyo, kuba ayinamanzi kwaye ilahla ubungqina. Iingxowa ze-Bubble zinokuxhathisa kweenyembezi kwaye zilula, ngenxa yoko akukho mathandabuzo okuba zinokugcina iimveliso zakho zintle kwaye zikhuselekile ngelixa ugcina iindleko zokuhambisa.
Iingxowa zethu zeposi zomelele kwaye akukho lula ukuzikrazula. Zonwabile ukubamba kwaye zinokusetyenziselwa ukuthumela izinto ezahlukeneyo. Ukongeza kusetyenziso lokuhambisa, banokuba luncedo ezivenkileni, ekhaya okanye ngamanye amaxesha. Ayisiyomveliso inkulu kuphela esetyenziselwa urhwebo kunye nokusetyenziswa buqu, kodwa ikwanobuhlobo kwindalo esingqongileyo njengoko iyi-100% yecompostable kwaye enokuboliswa ziintsholongwane.